स्लोभेनिया एउटा सानो देश हुन सक्छ, तर तिनीहरू ठूलो हुन्छन् जब यो अनलाईन क्यासिनोको कुरा आउँदछ। वास्तवमा भन्ने हो भने, तिनीहरूसँग युरोपमा प्रति व्यक्ति क्यासिनोहरू सबैभन्दा बढी संख्यामा छन्! त्यसोभए केले स्लोभेनियामा अनलाइन क्यासिनोलाई यति लोकप्रिय बनायो? यहाँ हामी यस मध्य यूरोपीय देशमा अनलाइन जुवाको बारेमा तपाईंलाई जान्न सक्ने सबै कुराको बारेमा कुरा गर्ने छौं, साथै स्लोभेनियामा सबैभन्दा उत्तम अनलाइन क्यासिनो र सबैभन्दा लोकप्रिय खेलहरू उपलब्ध छन्। यदि तपाईं यी सबै र अधिक सिक्न चाहनुहुन्छ भने, केवल पढ्नुहोस्।
शीर्ष १० स्लोभेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० स्लोभेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
एक उपन्यास अनुभव: स्लोभेनिया
धेरै व्यक्ति स्लोभेनिया भ्रमण गर्ने सोच्दैनन्। तर तिनीहरूले पक्कै गर्नुपर्छ। मध्य यूरोपको दक्षिण पक्षमा अवस्थित स्लोभेनियामा पहाडहरू र ज with्गलहरू छन्। यो युगोस्लाभियाको सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिकको साथ हुन्थ्यो। २०० Since देखि, यो EU को हिस्सा हो र २०० 2004 देखि, युरोजोनको अंश। युगोस्लाभियाले वारसा सम्झौतामा भाग लिएन र यसले विदेशीहरूबाट आएका भ्रमणहरूलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। तिनीहरूलाई अधिक आकर्षित गर्ने माध्यमको रूपमा, तपाईंले धेरै क्यासिनोहरू खोलिएको देख्नुभयो। यो १ 2007 s० र १ 1960 s० को दशकमा थियो। ती पर्यटकहरु संग एक ठूलो सफलता थियो र देश मा विदेशी आय प्राप्त गर्न को लागी एक धेरै आवश्यक तरिका थियो। मात्र मुद्दा; धेरै जसो क्यासिनोहरू स्थानीय स्वामित्वको थिएन त्यसैले मुद्रा फिर्ता देश बाहिर गयो। पोर्टोरो रिसोर्ट स्लोभेनियाको सब भन्दा पुरानो क्यासिनोको घर हो। यो १ 1970 १ in मा प्रकाश देखिएको थियो र यसको नाम ग्रान्ड क्यासिनो पोर्टोरोइ हो। यो वेब क्यासिनो सेट अप गर्न स्लोभेनियाई इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने पहिलो स्लोभेनियाई क्यासिनो थियो।
अनलाइन जुआ सम्बन्धी नियमहरू
ईयूका अन्य देशहरू जस्तै स्लोभेनियामा अनलाइन जुवा खेल्ने नियमहरू थोरै रेप गरिएको थियो किनकि यस्तो देखिन्थ्यो कि ती देशहरूले स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दैनन्। यि कानूनहरु लाई परिमार्जन गरिएको छ। यी संशोधनहरूले प्रतिस्पर्धालाई सम्भव तुल्याएको छ र हामी जान्दछौं कि अझै पनि आउँदैछन् किनकि तिनीहरू अझै पनि युरोपियन आयोगको समीक्षा अन्तर्गत छन्। अहिले, तपाईले अनलाइन क्यासिनोहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन स्लोभेनियाली इजाजतपत्र अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। हामी यी क्यासिनोहरूलाई धेरै माया गर्छौं र हामीले उनीहरूसँग कुनै प्रकारको बान्की देख्यौं them धेरै जसोसँग छ नोनोमेटिक सफ्टवेयर प्रदायकको रूपमा। हामीले तपाईंलाई रातको मुठभेडको रूपमा सोच्ने एक मात्र मुद्दा भनेको जान्नु हो कि कुन क्यासिनो वास्तवमा स्लोभेनियाका निवासी हो। अर्को कुरा हामीले देख्यौं कि यी अनलाइन क्यासिनोहरूको मार्केटिंगको पूर्ण अभाव हो। तपाईले खोज्नु भएको जानकारी या त गलत छ वा पुरानो हो। समीक्षा वेबसाइट र ब्लगहरूले स्लोभेनियालाई धेरै अनलाइन क्यासिनोहरूको घरको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यो केहि पनि होइन। कति कैसीनो स्लोभेनियाई हो भनेर जान्न सजिलो छैन। र तपाईं पत्ता लगाउन सरकारी वेबसाइटमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। यो लामो र जटिल प्रक्रिया हो।
स्लोभेनियामा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो
अहिले युगोस्लाभिया विघटन भएपछि स्लोभेनिया मे १, २०० 1 देखि युरोपियन युनियनको सदस्य भइसकेको छ। १ 2004 1989 until सम्म सबै किसिमका जुवाहरू अवैध थिए र त्यस बेलादेखि यो उद्योग बढ्दै र फस्टाइरहेको छ। जुवा ऐनको कार्यान्वयन, जसले १ 1995 XNUMX in मा प्रभाव पायो, अझ राम्रोको लागि वस्तुहरू परिवर्तन भएको छ।
विगत years० बर्षमा, होटलहरू द्वारा संचालित ईंट र मोर्टार क्यासिनोहरूले स्लोभेनियाको नजिकको अन्य केही लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरूको फाइदा उठाए। त्यो भने; सीमा क्षेत्रहरूमा धेरै क्यासिनोहरू छन् र खेलाडीहरूले ती क्षेत्रहरूमा उनीहरूको सबै मनपर्ने खेलहरू फेला पार्न सक्छन्।
पर्यटकहरू एक थ्रिलियाका लागि स्लोभेनियामा बस्थे, होटल र स्ट्यान्ड-एक्लो क्यासिनो मार्फत उनीहरूलाई धेरै विकल्पहरू पहुँचयोग्य छन्। चाहे तपाईं पन्टर हो जो एक रमाइलो सप्ताहन्तको खोजीमा हुनुहुन्छ वा तपाईं एक उच्च रोलर हुनुहुन्छ जुन उच्च शर्त लगाउन मनपर्दछ, स्लोभेनिया एक राम्रो विकल्प हो।
स्लोभेनियामा कानूनी रूपमा जूवा खेल्न तपाईंको उमेर १teen बर्ष भन्दा माथिको हुनु पर्छ। देशले नियमहरु लाई गम्भीरताका साथ लिन्छ। यति धेरै कि डाटाबेसहरू अपरेसनमा छन् उनीहरूको पहिचान क्याप्चर गर्न को लागी जो खेल को अनुमति छैन।
२०१ Online सम्म अनलाइन जुवा एक खैरो क्षेत्र थियो। यो भन्दा पहिले यो न कानूनी हो न अवैध। तर, २०१ 2013 पछि यो कानूनी हो र सरकारले खेलाडीहरूलाई सुरक्षित र उत्तम सुरक्षा प्रदान गर्न ठूलो हदसम्म जान्छ।
एक अद्यावधिक जुवा ऐन कार्यमा छ, तर यो बजार पूर्ण रूपमा विनियमित गर्न प्रगति ढिलो भएको छ। त्योले भन्यो कि, अनलाइन शर्तमा भाग लिन चाहनेहरू त्यसो गर्न स्वतन्त्र छन् तर यो मूल्यमा आउँदछ। खेलाडीहरूले € 15 वा अधिकको जितमा १ 300% कर तिर्ने आशा गर्नुपर्दछ।
के स्लोभेनियामा अनलाइन जुवा कानूनी छ?
सरकारले स्लोभेनियामा अनलाइन जुवाको वरिपरि कानून निर्दिष्ट गर्न कारबाही गर्नु अघि, तिनीहरूले ठूलो भारी प्रतिबन्ध लगाए। २०० 2006 मा फिर्ता, तिनीहरूले धेरै वेबसाइटहरू पहुँच गर्न खेलाडीहरू रोकेका थिए। अझ बढी, २०१ G मा नयाँ गेमि Law कानून लागू नभएसम्म स्थानीय सरकारले इजाजत पत्र दिन अस्वीकार गर्‍यो - स्लोभेनियामा आधारित अनलाइन जुवा वेबसाइटहरूलाई पनि।
चीजहरू अगाडि बढेका छन् र माथि उल्लेख गरिए अनुसार स्लोभेनियामा अनलाइन जुवा खेल्नु वैध हो कि एक पटक तपाईको उमेर १teen बर्ष भन्दा माथिसम्म। यूरोपियन युनियनका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको शासन गर्ने समान नियमहरू अब ठाँउमा छन्।
यो भन्नु उचित छ कि स्लोभेनियाले अन्य प्रगतिशील ईयू राज्यहरू समातिरहेको छ र सरकारले अहिले गेमि Act ऐनलाई अपडेट गर्ने कुरामा केन्द्रित गरिरहेको छ।
परिवर्तनहरू कानूनमा आए पछि स्लोभेनियामा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन अनिवार्य हुनेछ। नयाँ नियमहरूको पालना नगर्नेहरूले पर्याप्त जरिवाना भोग्नुपर्नेछ र तिनीहरूले खेल खेल्न प्रतिबन्धित हुने जोखिम चलाउनेछन्।
शीर्ष १० स्लोभेनियाई अनलाईन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 9, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० स्लोभेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० स्लोभेनियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 एक उपन्यास अनुभव: स्लोभेनिया
3 अनलाइन जुआ सम्बन्धी नियमहरू
4 स्लोभेनियामा सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनो
5 के स्लोभेनियामा अनलाइन जुवा कानूनी छ?
शीर्ष १० स्लोभेनियाली अनलाइन ...